वाद मध्येको जर्वजस्त वाद आर्शिवाद
जानुका न्यौपाने मंगलबार, फागुन १८, २०७७
आर्शिवाद, आर्दशवाद, परिष्कारवाद, स्वच्छन्दतावाद, यर्थाथवाद, अतियर्थाथवाद, प्रगतिवाद, प्रकृतवाद, प्रतिकवाद, विसङ्गतिवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, दादावाद, प्रभाववाद,, घनत्ववाद, भविष्यावाद, प्रयोगवाद, कलावाद आदि धेरै वादहरु छन् । अझ माक्र्सवाद लेनिनवाद, माओवाद, विपि वाद, मानवअधिकारवाद, महिलावाद, अतिवाद अनि आर्शिवाद के के वाद हुन् भनि र गन्न भन्न पनि असहज लागिरहेको छ । हुन चाँहि यी सबै वाद हुन कि हैनन् म त अलमल्ल परेको छु ।
अहिले हाम्रो समाजमा सुनिने, मौलाएको संस्कार छ त्यो आर्शिवाद जुन मैले बुझेकै छैन । हुन त मेरो बुझ्ने क्षमता कमजोर भएर पनि होला । महिलाको सावलमा दुईचार कुरा बोल्ने वित्तिकै महिलावादी कार्यको सम्मान, मानवअधिकारको सावल बुझ्दैमा र बोल्दैमा मानवअधिकारवादीको बिल्ला, थोरैतिना समाजका सामाजिक सवालमा बोल्ने बित्तिकै समाजिक अभियान्ताको खोल, जाति जनजातिका बारेमा केही सवाल बुझ्ने र बोल्ने वित्तिकै जनजातिको माला पहिरिने, माक्र्स र लेनिनको बारेमा केही बुझ्नेहरुको पछि लाग्दैमा माक्र्सवादी, लेनिनवादी हुने अनि त्यसको सिद्धान्त, नीति, आचरण के हो भन्ने व्यवहारमा केही पनि नउतार्ने माक्सवादी लेनिनवादीका सदस्य जो संगठीत पनि हुन्छन कि हुँदैनन् त्यो पनि पत्तो छैन ।
विपि कोइरालाको नाम बताउन सक्ने, गणेशमान सिंह आदि लगायतका केही व्यक्तित्वहरुको नाम बताउन सक्ने हुँदैमा, संगै बसेर राम्रो तस्विर खिचाउँदैमा क्रियाशील सदस्य हुने, खरो र खस्रो कुरा जान्ने मानिस नै सर्वेसर्वा हुने जस्ता कार्यहरुले गर्दा मेरो कानमा आजभोलि यस्ता शब्दहरु गुञ्जायमान भएर आउने गरेकाछन् । जुन चारैतिर सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छरिएको देख्न, सुन्न र पढ्न पाईन्छ । हुन त यो सूचना, प्रविधि र सञ्चारको युग हो यस्तो सुन्नु, पढ्नु र देख्नु स्वभाविक रुपमा नै लिने गरेको छु । त्यो त मेरो दिन चर्या नै बन्ने गरेको छ कि आजको ताजा समाचार के हो भनेर सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने ।
तर मैले हालसालै सबैतिर बल्झ्योे रे भन्ने सुनेको कुरा आर्शिवादको घाउ हो । के हो त्यो आर्शिवाद ? कसले, कहिले÷कहिले, कसरी कुन मन्त्रोचारण गरेर क–कसलाई दिने रहेछन् ? अनि कहिले शुरु भएको रहेछ यो आर्शिवादको इतिहास त थाहा छैन मलाई । र, अहिले कसरी उकुच परेछ कुन्नी आर्शिवादको घाउमा ? मैले नबुझेको धेरै वादहरु छन् त्यसमध्येको आर्शिवाद त झन कठीन लाग्न थालेको छ । किनकि दशैं, तिहार र पर्व विशेष अभिभावकबाट प्राप्त हुने आर्शिवाद ।
अनि मैले यतिवेला अरु सबै वादहरु मौलाएका बेला आर्शिवाद झनै मौलायो रे बौलायो रे सबैतिर भन्ने पो सुनें । कसले कतिवेला लिने, पाउने र दिने काम हुनेरहेछ ? बजारमा पसलहरुमा यत्रतत्र सर्वत्र थोक÷थोकमा पाइन्छ रे आर्शिवाद । के तपाईं हामी सबै आर्शिवाद थाप्न लाम लागेर बसेकाहरुको लाम हेर्दाहेर्दै निष्पट्ट अँध्यारो परुनजेल रुमलिने पो हौं कि ? सचेत भएर सुनौं त । यो सवालले हलचल मच्चाएको छ आजकाल थोक तथा खुद्रा बजारमा ।
आर्शिवादै सही तर कतिले कतिलाई थोकमा र खुद्रामा दिने अधिकार पाएका छन त्यसको पनि लेखाजोखा होला नि आर्शिवादको घाउमा उकुच पर्नुको पछाडि कि कसो हो ? म त अलमल्लमा परेर सुनिरहेको छु यस्तो कुरा । जब आर्शिवादको घाउमा उकुच पर्छ तव त्यहीनेर उपचारको लागि फेरि खोजि हुँदो रहेछ औषधीको । अनि त्यसको अचुक औषधी भने निष्ठा, प्रतिष्ठा, इमान्दारिता, योग्यता, क्षमता, प्रतविद्धता, सहनशीलता, संयमता, चरित्रवान, धर्यता, अनुशासन, विधि, पद्धती, प्रकृया आदि इत्यादि ती सबै हुन् रे । आर्शिवादको घाउ निको पार्ने ती सबै औषधी जानेको र औषधी पसल भएको पक्ष, व्यक्ति वा व्यक्तित्वहरु को को हुन् त्यसको खोजी भइरहेको छ आजको थोक तथा खुद्रा बजारमा । यो मैले प्रविधिको प्रयोगकर्ताहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल, असरल्ल असभ्य रुपमा पोखिएका अपशब्द, गाली तथा नकारात्मक टिप्णीबाट बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
अहिले जसले जुन वादी हुँ भनेर हिड्दा पनि ठीकै हुन्छ भनेर सोचिरहेका छन् सबैले यही वादलाई नै पछ्याएर सबै आर्शिवादी नै बन्ने त ? अनि मैले नबुझेको वाद भित्रको जर्वजस्तवाद आर्शिवादको अन्त्यको लागि आर्दशवादको बुझाईलाई बलियो बनाउने काम कस्ले गर्ने होला ? सहज र सरल रुपमा केलाई वाद भन्ने ? केलाई आर्शिवाद भन्ने अनि मैले सुनेजति सबै वाद र वादी हुन त ? मेरो मनमा खुल्दुली मच्चिरहेको छ ।
जसलाई सम्मान गरेर उच्च मान्यो उसैले सम्मान के हो भनेर बुझेकै पो छै न कि ? हुन त आजभोलि सम्मानका कुरा नगर के हो त्यो सम्मान ? भनेर उल्टै सवाल गर्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ । तिम्रो सम्मान आफैं राख या सम्मानका भोकाहरु लाई लगेर बुझाउ । जो सम्मानको भोको छ जसले तिमिलाई आर्शिवाद दिन्छ पो भन्छन् । अनि त्यस्ता सवाल सुनेर लाग्छ कि मैले कुनै वाद त बुझेको छैन झन आर्शिवाद त कसरी बुझ्नु र को आर्शिवादी हो ? कसले दिने हो आर्शिवाद ? मैले आजसम्म बुझेको आर्शिवाद भने दशैंमा अभिभावक, आदरणीय, आफूभन्दा ठूलाबाट मात्र लिने हो भन्ने पो बुझेको छु । हुन त मैले जे बुझें त्यो आम मानिसमा लागू हुन्छ भन्ने चाँहि होइन है । हुनसक्छ म आफैं भ्रममा नै रहेको वा मैले बुझेको आर्शिवाद फरक हो ?
कतै आर्शिवाद पनि व्यवसाय गर्न पो गएछ कि बजारतिर आजभोलि ? कोरोनाले सबैसँग समय सयमा भेटघाट हुन नपाएर बजारमा थोक र खुद्रामा लेनदेन गर्न पो गएको हो कि ? मैले त्यो बुझेको छैन । आर्शिवादको उकुच परेको घाउ निको पार्ने उपायको खोजीे भइरहेको छ यहाँ । जहाँ थुप्रै वादहरु मौलाइरहेका छन् त्यसमा पनि आर्शिवाद । जहाँ धेरै वादहरुले घर गरिरहेका छन्, धेरैको मनमा आर्शिवादको आशाले डेरा जमाइरहेको छ । हो त्यसैले होला मैले खोजेको आर्शिवादको घाउ निको पार्ने अचुक औषधी, उपाय गुमनाम भएको छ ।
मैले खोजी गरेको औषधी, उपाय कहाँ गएर, कहिले, कसरी भेटिने हो ? सदाकालका लागि हराउने पो हो कि ? यदि हराउने नै अवस्थामा पुगेको हो भने बुझ्नेहरुले यस्का चिकित्सकहरुले उपचार गराउन समयमै ध्यानु दिनु पर्ला कि ? कसले समयमै उपचारे गरिदेला आर्शिवादको उकुच परेको घाउ मेरो जिज्ञाशा कायम नै रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १८, २०७७, १४:३६:००